Bush Iyo Clinton: Madaxweynayaal Dhaqanka Siyaasada Ku Kala Fogaa Oo Bandhig Faneed Dhalinyarada Dalkooda Ah Ku Midoobay | Hawraar
September 23, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Bush Iyo Clinton: Madaxweynayaal Dhaqanka Siyaasada Ku Kala Fogaa Oo Bandhig Faneed Dhalinyarada Dalkooda Ah Ku Midoobay
Labadii madaxweyne ee hore u soo xukumay dalka Maraykanka, George W. Bush Iyo Bill Clinton ayaa si wada jir ah uga wada qayb qaadanaya, badhig masrixiyadeed wacyi gelin lagu siinayo dhalinyarada dalka Maraykanka, kaas oo la xidhiidha sidii ay dhalinyaradu u daraasayn lahayd aqoonta siyaasada ee figrada sare ku dhisan.
Bill Clinton oo ahaa Madaxweynihii 42nd ee dalka Maraykanka, waxa aragti ahaan marka laga hadlayo siyaasada iyo mawqifnimada xisbi si wayn ugu kala duwanaayeen, Madaxweynihii ku xigay ee George W. Bush oo madaxweynihii 43rd ka noqday dalka Maraykanka.
Laakiin labadan Madaxweyne ee hore u soo xukumay Maraykanku waxay soo wada geleen bandhig masrixiyeedkan dhalinyarada lagu dhiiri gelinayo, inay daraaseeyaan si gaar ahna u qaataan, aqoonta siyaasada casriga ah ee aragtida durugsan ku dhisan.
Sidii labo qof oo aad u saaxiib ay iyaga oo u muuqda ayay soo galeen, waxaanay iyagoo gacmaha is haysta, bilaabeen kaftan iyo amaan midba midka kale u jeedinayay, in kasta oo mid walba si qoto dheer oo ay adag tahay sida loo dareemaa, u sheegayay khaladaadkii uu ka kale sameeyay iyo waxyaabihii uu kaga soo hor jeeday siyaasadiisa.
Marka la isku soo wada duubo labada madaxweyne waxa ay muujiyeen dareen dadka xiiseeya arrimaha siyaasada iyo daawashada bandhigyada wacyi galinta ah, ku abuuryay ama sii jeclaysiinayay inay daawadaan, kuna dhiiri gelinaya in fariinta ay gudbinayeen ay dhug yeeshaan.